Google Analytics ၏ပရိုဖိုင်းစစ်ထုတ်ရန် Semalt လမ်းညွှန်
segments များ သုံး၍ web analytics ကိုလေ့လာခြင်းသည်၎င်းကိုနားလည်ရန်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဂူဂဲလ် Analytics သည်စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲနိုင်သောအရာများ၊ ပရိုဖိုင်းစစ်ထုတ်ခြင်းများနှင့်အချက်အလက်များခွဲဝေရန်အစွမ်းထက်ဆုံးနည်းလမ်းများအနက်အဆင့်မြင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုပေးသည်။ နောက်ဆောင်းပါးတွင် Semalt Customer Customer Success Manager Oliver King သည်ပရိုဖိုင်းစီစစ်ခြင်းကိုဆွေးနွေးလိမ့်မည်။
၎င်းသည်ရေရှည်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုမဟာဗျူဟာဖြစ်ပြီး၎င်းကို ပြောင်းလဲ၍ မဖျက်နိုင်ပါ။ ကျွမ်းကျင်သူများကသုံးစွဲသူများသည်အချက်အလက်သိုမဟုတ်သောပရိုဖိုင်းတစ်ခုရှိရန်လိုအပ်သည်၊ အကယ်၍များ လုပ်ငန်းစဉ်မှားယွင်းနေပါက၎င်းတို့ကိုအရန်ကူးရန်အတွက်အသုံးပြုနိုင်သည်။ ဂူဂဲလ် Analytics ပြောင်းလဲမှုသမိုင်းသည်ပရိုဖိုင်စစ်ထုတ်မှုများသို့ပြောင်းလဲမှုများကိုခြေရာခံရန်ကူညီသည် ယခုအခါပရိုဖိုင်းစစ်စစ်များသည်စစ်ထုတ်မှုအသစ်များကိုစစ်ဆေးရန်လိုအပ်သည့်အချိန်နှင့်တပြေးညီအစီရင်ခံစာများကိုကျင့်သုံးသည်။ ပရိုဖိုင်းအသစ်၏ရလာဒ်များကိုကြည့်ပြီးအမှားမှန်သမျှပြင်ပါ။
တစ်ဆယ်အသုံးဝင်သော Google Analytics ကိုယ်ရေးအချက်အလက် filter များ
၁။ IP လိပ်စာထည့်ပါ
ဒါဟာရည်မှန်းချက်အောင်မြင်မှုစမ်းသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းတွေထဲကတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတစ်ခုသည်ကုမ္ပဏီကြီးတစ်ခုတွင်အလုပ်လုပ်ပါကထိုလိပ်စာ၌ပင်အခြားသူများရှိနိုင်သည်။ Google Analytics စစ်ထုတ်ခြင်း tab အောက်တွင်အသစ်တစ်ခုကိုဖန်တီးပါ၊ ၎င်းကိုနာမည်ပေးကာကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့် filter နှင့်အတူ box ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ သင်၏လက်ရှိအိုင်ပီနှင့်ကိုက်ညီသောအောက်ပါ IP လိပ်စာများမှသီးသန့်ထည့်သွင်းရန်ရွေးချယ်ပါ။
ကုမ္ပဏီနှင့်လူသိများသောတတိယအဖွဲ့အစည်းများမှထုတ်လုပ်သောအတွင်းပိုင်းအသွားအလာကိုဖယ်ထုတ်သည့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအချက်အလက်များကိုတည်ဆောက်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာဤ visitors ည့်သည်များသည်ပုံမှန်မဟုတ်သောစာမျက်နှာအမြင်များနှင့်အပြုအမူများကြောင့်ဖြစ်သည်။ ဆိုက်ပိုင်ရှင်များကသူတို့ site ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ထားသောပုံမှန်လည်ပတ်သူများနှင့်ကွဲပြားသည်။ Filter သတင်းအချက်အလက်များအောက်တွင်စိတ်ကြိုက် filter ကိုရွေးပါ၊ Exclude checkbox ကိုအမှန်ခြစ်ပေးပါ။ filter field သည် IP address ကိုဖတ်သင့်ပြီး filter ပုံစံကိုဆက်လက်ထည့်သွင်းပါ။ ဤစစ်ထုတ်မှုအတွက်စာလုံးအကြီးအသေးမရှိပါ။ IP address range tool ကိုအသုံးပြုပြီးသင်လိပ်စာများကိုစစ်ထုတ်နိုင်သည်။
သင်သည် CPC မဲဆွယ်စည်းရုံးရေးကိုကြီးကြပ်ပြီးသင်နှင့်သက်ဆိုင်သည့်အေဂျင်စီတစ်ခုမှဤအချက်အလက်များကိုရယူလိုခြင်းမရှိပါက၎င်းစီစစ်သည်စီပီစီအချက်အလက်များကိုသူတို့၏ကိုယ်ရေးကိုယ်တာမှဖယ်ထုတ်ရန်ကူညီနိုင်သည်။ တူညီသော filter အချက်အလက်အောက်တွင် filter ကို "excCc visitor" ကဲ့သို့အမည်အသစ် ပေး၍ ၎င်းကို custom filter label တစ်ခုသတ်မှတ်ပါ။ Exclude box ကို Check လုပ်ပြီး Campaign Medium ကိုစစ်ထုတ်ပါ။ filter ပုံစံသည် CPC ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စာလုံးအကြီးအသေးအရေးမကြီးပါ။
၄။ Campaign Attributes တွင်စာလုံးအသေးထိုးပါ
ကုမ္ပဏီကြီးလေလေ၊ စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးတံဆိပ်တပ်သည့်လုပ်ငန်းစဉ်အရေအတွက်များလေလေဖြစ်သည်။ ပထမဆုံးအနေနဲ့စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုဘယ်လိုအမည်ပေးသင့်တယ်စတဲ့တင်းကျပ်တဲ့လမ်းညွှန်ချက်များကိုလိုက်နာဖို့အရေးကြီးတယ်။ ဤပြproblemနာကိုကျော်လွှားနိုင်ရန် UTM စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးသတ်မှတ်ချက်များတွင်စာလုံးအကြီးငါးခုကိုထည့်ပါ။ ၎င်းတို့တွင်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကြားခံ၊ အရင်းအမြစ်၊ အကြောင်းအရာ၊ သက်တမ်းနှင့်အမည်တို့ပါဝင်သည်။ "စာလုံးအသေးပေါ် Campaign Attributes" စသည့်အမည်အသစ်တစ်ခုကိုရွေးပါ။ စိတ်တိုင်းကျစစ်ထုတ်သည့်နေရာအောက်တွင်၊ "စာလုံးအသေး" ကိုရွေး။ 'ကင်ပိန်းအလယ်အလတ်' ကို filter field အဖြစ်ရိုက်ပါ။ ဂူဂဲလ် Analytics တွင်အလတ်စားမှတ်ပုံတင်ခြင်းအားလုံးကိုစံသတ်မှတ်ထားသောကြောင့်ပိုမိုလွယ်ကူစွာခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုအတွက်အချက်အလက်များကိုရှင်းလင်းပေးသည်။
5. တောင်းဆိုမှု URI အပေါ်စာလုံးကြီး
URL များအနေဖြင့်စာလုံးအကြီးနှင့်စာလုံးအကြီးနှစ်မျိုးလုံးကိုယူနိုင်သည်။ ကွဲပြားသောစရိုက်လက္ခဏာများရှိသောဆင်တူစာမျက်နှာ ၂ ခုသည် / about-Us / နှင့် / about-us / ကဲ့သို့တူညီသောအကြောင်းအရာများကိုပြန်လည် ဦး ဆောင်သော်လည်းသီးခြားအမြင်နှစ်ခုအဖြစ်မှတ်တမ်းတင်နိုင်သည်။ ဤပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန် filter အသစ်တစ်ခုကို ဖန်တီး၍ "စာလုံးအကြီးအသေးတောင်းခံမှု URI" ကိုအမည်ပေးပါ။ ၎င်းသည်အက္ခရာအသေးများပါရှိသောစိတ်ကြိုက် filter တစ်ခုဖြစ်သည်။ Filter field သည် Request URI ကိုဖတ်သင့်သည်။
URI ကိုတောင်းဆိုရန် Hostname ကိုပူးတွဲပါ
အကယ်၍ ဂူဂဲလ်သည် multidomain အကောင်အထည်ဖော်မှုကိုလုပ်ဆောင်ပြီး domains နှစ်ခုအတွက်အချက်အလက်အားလုံးကိုပရိုဖိုင်းတစ်ခုတွင်စုဆောင်းမည်ဆိုပါကအမည်နှစ်ခုအားခွဲခြားရန်မလွယ်ကူပေ။ အလယ်အလတ်အတိုင်းအတာ (သို့) hostname တစ်ခုထည့်ခြင်းသည်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်ကူညီသင့်သည်။ filter ကို "hostname to Request URI" လိုနာမည်ပေးပြီးအဲဒါကိုစိတ်တိုင်းကျလုပ်ပါ။ "Advanced" ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။ Extract A အတွက် Field A သည် hostname ဖြစ်သင့်ပြီး B မှ Extract B သည် Request URI ဖြစ်သင့်သည်။ "Output To" - Constructor လည်း "Request URI" ဖြစ်သင့်သည်။ နယ်ပယ်အားလုံးသည် Field B မှလွဲ၍ လိုအပ်သည်။ စာလုံးအကြီးအသေးမရေးသင့်ပါ။
တခါတရံနိုင်ငံတကာအသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်ပြီးအချို့သောဒေသများကိုစစ်ထုတ်ရန်လိုအပ်သည်။ အောက်ပါ filter ကိုသုံးပါ။ Custom filter အသစ်ကိုဖန်တီးပြီး၎င်းကိုခေါ်ပါ "Include Ne | Be | Ger" ဟုပြောပြီးထည့်ရန်ရွေးချယ်ပါ။ filter field သည် "Country" ဖြစ်သင့်ပြီး filter type "Netherlands | Belgium | Germany" ဖြစ်သင့်ပြီးစာလုံးအကြီးအသေးမဖြစ်သင့်ပါ။
၈။ မိုဘိုင်း Only ည့်သည်များသာပါ ၀ င်ပါ
မိုဘိုင်း visit ည့်သည်များ၏စွမ်းဆောင်ရည်ကိုအနီးကပ်ကြည့်ရှုလိုပါကကုမ္ပဏီများသည်၎င်းကိုအသုံးပြုသင့်သည်။ အကြံပြုထားသော filter name သည် "Include Mobile" ဖြစ်ပြီးစိတ်ကြိုက် filter တစ်ခုဖြစ်သင့်သည်။ ပါဝင်သည့်အကွက်ကိုအမှတ်အသား ပြု၍ "မိုဘိုင်း?" ကိုရွေးချယ်ပါ။ အဆိုပါ filter ကိုလယ်ပြင်၌။ filter ပုံစံတွင် "Yes" ကိုရွေးပါ။ စာလုံးအကြီးအသေးအတွက် "no" ကိုရွေးချယ်ပါ။
၉။ တိကျသော Subdirectory သို့သာ Traffic ထည့်ပါ
ကုမ္ပဏီ ၀ ဘ်ဆိုဒ်တွင်ဘလော့ဂ်ကဏ္ includes ပါ ၀ င်ပြီး၎င်းတွင်ရေးသားချက်များထည့်သွင်းထားသည့်အကြောင်းအရာရေးသားသူများရှိပါက၎င်းတို့၏လမ်းညွှန်ကိုဝင်ရောက်ခွင့်ကိုကန့်သတ်ရန်အကြောင်းပြချက်များစွာရှိသည်။ ၎င်းကိုကိုင်တွယ်ရန် "Include Blog Traffic" အမည်ဖြင့်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသော filter ကိုဖန်တီးပါ။ "/ blog / နှင့် subdirectory အနေဖြင့်စတင်သော subdirectories များသို့ traffic ကိုသာထည့်သွင်းပါ။ စာလုံးအကြီးအသေးမဖြစ်သင့်ပါ။
၁၀။ သီးခြား subdirectory သို့သာအသွားအလာကိုထည့်ပါ
၎င်းသည်အခြားသူများကို Google Analytics ၏ကိုယ်ရေးအချက်အလက်နံပါတ်ကိုယူပြီးအခြားဒိုမိန်းများတွင်တင်ခြင်းမှတားဆီးသည်။ ၎င်းသည် run နေသောပရိုဖိုင်းနံပါတ်နှင့်အတူစင်မြင့်သို့မဟုတ်စမ်းသပ်ဒိုမိန်းများကိုလည်းစစ်ထုတ်သည်။ စိတ်ကြိုက် filter အသစ်ကိုထည့်ပါ။ Include Example Domain နှင့်ထည့်ပါ။ ၎င်းတွင် "Hostname" filter field နှင့် "exampledomain \_ .com" ရှိသင့်သည်။ စာလုံးအကြီးအသေးအရေးမကြီးပါဘူး
၁၁။ အပိုဆု - Query Parameters အားလုံးကိုဖယ်ထုတ်ပါ
အကယ်၍ လက်ရှိဝက်ဘ်ဆိုက်၌၎င်းတို့တွင်များပြားပါကနည်းပညာဆိုင်ရာရှာဖွေမှု parameters များကိုစစ်ထုတ်ရန်လည်းအရေးကြီးသည်။ GA တွင်စာမျက်နှာများပါ ၀ င်သောနံပါတ်များကိုလျော့ကျစေပြီးပိုမိုအဓိပ္ပါယ်ရှိစေသည်။ စိတ်ကြိုက်စီစစ်ရန်အတွက် "Exclude All Query Parameters" ကိုသုံးပါ။ "Advanced" ကိုအမှန်ခြစ်ပါ။ Extract A အတွက် Field A သည် URI ကိုတောင်းဆိုသင့်ပြီး B မှ Extract B သို့ကွက်လပ်ထားပါ။ "Output To" - Constructor လည်း "Request URI" ဖြစ်သင့်သည်။ နယ်ပယ်အားလုံးသည် Field B မှလွဲ၍ လိုအပ်သည်။ စာလုံးအကြီးအသေးမရေးသင့်ပါ။
ဂူဂဲလ် Analytics စစ်ထုတ်မှုများကိုအသုံးပြုသူကသူတို့ဖြည့်စွက်ထားသည်။ သူတို့ကို administrator dashboard ရှိပရိုဖိုင်းဆက်တင်များတွင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်